Maxay tahay ujeeddada booqashada Waftiga Somaliland uu ku marayo Mareykanka? - BBC News Somali
Image caption Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland
Wafti ka socda Jamhuuriyadda Iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland oo uu hoggaaminayo wasiirka arimaha dibadda Yaasiin Max'ud Xiir oo booqasho ku marayo Mareykanka ayaa la filayaa iney la kulmaan dowladda Mareykanka iyo labada aqal ee dalkaasi.
Wasiir Yaasiin oo BBC uga warramay ujeeddada socdaalkooda ayaa wuxuu sheegay iney Mareykanka u yimaaddeen si ay ula kulmaan Dowladda Mareykanka, Aqalka Senetka, Aqalka Congresska iyo Kooxda loo yaqaanno Ting Tang ee hagta fikradaha iyo siyaasadda Mareyknaka.
Waxaynu dooneynaa ayuu yiri "inaan kulammada aan la yeelaneyno hay'adahaasi kala duduwan aan u soo bandhigno qaddiyadda Somaliland iyo xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan Bariga Afrika."
Inti aan ilaa iyo hadda la kulannayna waa ay soo dhaweeyeen fikirka Somaliland ay ku taagan tahay iyaga oo noo sheegay ayuu yiri "waxa aan dooneyno iyo waxa aan ku hadleynaba inuu yahay kii xaqa ahaa."
Ilaa iyo hadda waxaan la kulannay ayuu yiri xubno ka tirsan golayaasha Senetka iyo Koongreska iyo xubno iyaguna ka tirsan Kooxda Ting Tang iyo wariyeyaal intaba.
Wasiir Yaasiin Max'uud Xiir mar wax laga weydiiyey isbeddelada geeska Afrika iyo Iskaashiga cusub ee ay hormuudka ka yihiin Itoobiya, Soomaaliya iyo Eretriya wuxuu yiri ka Somaliland ahaan dadka ku nool waddamada geeska Afrika iney iskaashadaan nabad ku wada noolaadaan waan soo dhaweyneynaa ka Somaliland ahaanna wax Saameyn ah oo ay noo geysatay ama inoo muuqda ma jiro.
Mar uu wasiirka ka hadlayey isku soo dhawaashaha waddamada Geeska Afrika saameynta la sheega iney u geysatay xiriirka Itoobiya iyo Somaliland u dhaxeeyey ayaa wuxuu sheegay "iney jirin haba yaraatee wax saameyn ah oo ay u geysatay, xiriika ganacsi wuu socdaa, Itoobiya Safiirkeedi hore wey beddeshay mid ka miisaan badan oo waaya arag ah ayeyna shalay u soo magacaawday marka wax xiriir oo xumaaday oo inoo dhaxeeyey anaga iyo Itoobiya."
Wadahadalladi Soomaaliya ay la lahaayeenna wuxuu sheegay iney marwalba Somaliland dhankeeda sida ay horay u billaawday iney sii waddo ay diyaar u tahay balse, waxa wadahadallada iyo qodobbadi sida ku meel gaarka ah looga heshiiyey fulintoodaba ka cagajiidaya ay tahay Soomaaliya.